Ikamva leencwadi kunye noncwadi | Uncwadi lwangoku
Ikamva leencwadi kunye noncwadi
Kwinkulungwane yeshumi elinesithoba amabali athethwe ngezavenge ngeCawe aphumelela, kwinkulungwane yamashumi amabini inkcubeko yomthengisi othengisa kakhulu yagqitha kwaye kwinkulungwane yamashumi amabini ananye i-Intanethi kunye nobuchwephesha obutsha buye bavumela incwadi ye-elektroniki ukuba ikhuphisane ngokucacileyo ephepheni. . Ukuxhasa okwahlukileyo, iindlela ezizezinye zokukhulelwa koncwadi kodwa into ihlala ihleli: uthando lwengoma ezinokutshintsha ngakumbi kule minyaka izayo. Inyaniso ethi, phakathi kwezinye iingcali kunye nokubonisa kombhali, iyaziphosa Iziprofeto ezi-5 malunga nekamva leencwadi kunye noncwadi.
1 Umbhali uya kuba yinkwenkwezi
2 Ukuphulukana nomfundi ococekileyo
3 Ukudityaniswa kwehlabathi ngokubanzi
4 Ukususwa kwe-DRM
5 Ingxelo yosasazo
Umbhali uya kuba yinkwenkwezi
Xa i-intanethi iboleka izixhobo ezaneleyo zombhali zokuyila, ukupapasha nokusasaza umsebenzi, Amandla okuphumelela enkosi kwiprofayili inika amathuba amakhulu kwindima yombhali xa kuthelekiswa namaxesha abapapashi yayingabacoci kuphela. Uluvo lokuba, nangona lusenomtsalane, lukwajongana nenyani yelifu eligcwele imisebenzi epapashiweyo kunye neencwadi apho amandla okhetho (kunye nokhuphiswano) nawo mkhulu kakhulu. Kwaye kulapho umbhali, ukukwazi kwakho ukuthengisa, Ukupapasha umxholo onxulumene nomsebenzi wakhe kunye nokuma kwimidlalo (kwaye uya kudlala) indima ebalulekileyo ngaphezu komsebenzi ngokwawo.
Ukuphulukana nomfundi ococekileyo
Umhleli waseSpain uConstantino Bértolo wakhe wathi «Ukufundwa ngokwesiko bekuyenye yeendawo ezimbalwa apho, xa ubaleka ukuxakeka nakwizinto ezingxamisekileyo, umfundi wayenokuba novuyo lokuhlala kude nesihlwele esinomsindo.«, Into engasasebenziyo ukusukela, phakathi ekufundeni, ukuphazamiseka kwesilumkiso se-Instagram okanye i-LinkedIn kwi-smartphone yethu iba yimfuneko ngakumbi kunokucaphukisa. Oku kukhokelela ekusasazekeni kwengqwalaselo yomfundi, ethi, eyongezwe kwinani lolwazi olufumanekayo ngoku kwi-Intanethi, iya kubangela ukungakwazi okukhulu ukuzinikezela ngokusisigxina ekufundeni incwadi ngaphandle kweziphazamiso, ugxile kumagama, uzizikisa kwabanye. indalo.
Ukudityaniswa kwehlabathi ngokubanzi
Umbhali wase-Nigeriya uChimamanda Ngozi Adichie, ongomnye wabona babalaseleyo babalobi abatsha baseAfrika.
Ukutyhubela iinkulungwane, iNtshona ibinegunya elilodwa kubugcisa noncwadi, inyanzelisa amazwe ayo akoloniyali ukuba ayilahle inkcubeko yawo, kungoko kwiminyaka elikhulu eyadlulayo sasingazi ukuba amava omntu waseAfrika afike e-United States okanye inyani Amazwe ayenjengabaninzi abasetyhini abasuka kubasetyhini baseSenegal, ukunika imizekelo emibini.
Ukuqhuma kwe Ilizwe elinenkcubeko eya lisanda kuya kusivumela ukuba siqhubeke nokufumana amabali amatsha ukuba kangangeenkulungwane bahlala ekuthinjweni ngenxa yobuzwilakhe obunegazi, ukungazi, impiriyali okanye ukucinezela ukuzikhulula, ngakumbi ngokubhekisele kumazwe ase-Afrika apho "abagwetyelweyo uMhlaba" babehlala khona, okanye amakhonkco e-post-colonization, abathi ngaphezulu kwesinye isihlandlo ababhali abanjengoKenya Ngũgĩ wa Thiong'o.
Yaziwa njenge-DRM (ulawulo lwamalungelo edijithali) ube lihlakani labapapashi abaninzi xa kufikwa ekubetheni umxholo we-ebook ongenakuprintwa okanye kwabelwane ngawo njengendlela yokulwa ubuqhetseba. Ingxaki iza xa ukhuseleko oluninzi luguqulela kwiikopi ezimbalwa ezithengisiweyo ngenxa yokungakwazi ukufunda ifayile kwimidiya eyahlukeneyo, mhlawumbi esona sizathu siphambili sokuba ukukhutshwa kwencwadi ye-e kuye kwacotha kunokuba bekulindelwe.
Ukupheliswa kwe-DRM kwilizwe elinedijithali kunokuba yinto ephambili, ngelixa impumelelo entsha kwii-inki zokushicilela kwidijithali okanye kwimodeli Qengqeleka iphepha elektroniki baya kubonelela ngamanyathelo asebenzayo okulwa nokuhlaselwa.
Ukulungelelaniswa koncwadi kwilizwe ledijithali Kwaqala ngokufakwa kwamakhonkco, emva kwemifanekiso okanye infographics, kwaye okwangoku kukho iingcali ezininzi ezisebenza ngeendlela ezintsha zokubalisa amabali, enye yazo yingxelo ye-transmedia. Ukukwazi ukuphucula Ukuxoxa ngamabali Ukuxhomekeka kunxibelelwano kwamanye amajelo osasazo kunokuba yimpendulo kwindalo yonke yoncwadi olwahlulwa-hlukeneyo apho ubudlelwane phakathi kwababhali kunye nabafundi busondele kwaye bukhawuleza okanye icandelo elibonakalayo lidlala indima yokumisela kwiifom zokubalisa.
Ikamva leencwadi kunye noncwadi Ihlala ingaqinisekanga ncam, nangona imikhwa kunye notshintsho olwenzekileyo kwiminyaka yakutshanje sele lubonisa indlela yokuziphatha komfundi wexesha elizayo, imithombo yeendaba, ubuqhetseba nokhuselo, kodwa ngaphezulu kwayo yonke into: ukuqhubekeka nokubala. kunye nokufumanisa amabali anomdla.
Ewe kunjalo, mhlawumbi phantsi kwemfuneko yokuvala umlomo yethu smart.
Ucinga ntoni ngekamva leencwadi noncwadi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ikamva leencwadi kunye noncwadi
"Iiglobos", inoveli yomanyano nguRocío Álvarez-Rementeria omncinci